Shina Lehibe lehibe fiara mifono vy any Chine | Jrain
Ny fiara mifono vy fiantsonan-tsolika no safidy tsara indrindra amin'ny toe-javatra rehetra izay tsy ahafahan'ny haben'ny fitaovana manome fitaterana. Ho an'ny fiara fitaterana lehibe toy izany, matetika dia alefa any amin'ny toeram-piasana ny fitaovana fanamafisam-peo, amoron-tsofina ny akorandriaka be fibre ary manangona ny fiara mifono amin'ny fototra farany na any amin'ny faritra fivorian'ny toeram-piasana.
Habe: DN4500mm - DN25000mm.
Ny dingana mahazatra ho an'ny fiara fitaterana lehibe habe dia:
1. Manetsika ny ekipa mpanamboatra ary manendry mpikarakara tetik'asa; Alefaso ny milina sy fitaovana hanampiana ny sahanasa.
2. Ampifandraiso amin'ny milina fanamboarana sy famolavolana ny môtô ho an'ny marika.
3. Manaova liner ary manaova fanamafisana araka ny angon-drindrina.
4. Manongotra ary avy eo mametraka ny tankina amin'ny toerana mety.
5. Amboary ny fametahana toy ny nozzles, tohatra, fanidiana, sns, ary manao fitsapana hidrôtrika. Farany atolotra ny mpanjifa.
Ny masinina dia fitaovana milina fanodinana tena mahazatra sy bobongolo ho an'ny fanamboarana fiara mifono vy sy fanaka. Ny fananana laminate azo miaraka amin'ny fitaovana fanamafisana ny saha dia mitovy amin'ny toetran'ireo laminate vokarina amin'ny atrikasa. Ny fandaharam-potoan'ny tetik'asa dia tsy maintsy misy fotoana ahafahana manangana milina fanamafisana finday.
Ny volon-koditra sy fiberglà samihafa dia hofidina rehefa mamolavola ireo vokatra ho an'ny fitahirizana sy fanodinana ireo ranon-javatra na etona feno fanakorontanana. Ireo mpandraharaha sy famenoana samihafa dia azo ampiasaina hifanatrehana ny fepetra takian'ny serivisy samihafa rehefa takiana.
Ny fanamboarana saha sy ny fametrahana dia mety ho lafo, ary matetika maharesy ny olana sy ny fidirana amin'ny sarotra. Ny famokarana tranokala an-tserasera dia mety hampihena ny vidin'ny fitaterana ary afaka mandrindra am-pahombiazana amin'ireo mpiantoka an-toerana hafa.
Manankarena ny jrain ary manamboatra fiara mifono vy sy sambo lehibe ao amin'ny tranokala sinoa sy manara-maso tranokala samy hafa.
Rehefa atolotra ny mpanjifa amin'ny mpanjifa dia afaka manome fiofanana momba ny fampiasana ny milina ny Jrain raha takiana.
Fenitra fototra azontsika arahana:
Manaraka: Tavy fitaterana
Tank Lozan'i FRP
Jrain dia manana ny teknikan'ny famokarana maoderina mamela ny fiara mifono fiara fitaterana indray mandeha. Ny tankina toy izany dia amboarina amin'ny fizarana samihafa izay azo atambatra amin'ny tranokala. Ireo akorandriaka voapoizina dia hivoatra amin'ny alàlan'ny fomba manokana ary hiarahana miasa eo amin'ny toeram-piasana. Raha tsy ny tombony mahazatra azo avy amin'ny tanky fibre dia aseho ihany koa ny: ny fiara mifono lakandrano dia: Solon'ny olana fitaterana làlana; Namboariny ny habaka araka izay azo atao tamin'ny atrikasa; Manamaivana ny fi ...
Ireo fiara mifono vy sy fanaka, anisan'izany ny singa fanampiny, dia azo atao endrika na endriny rehetra, manaporofo ny fahafaha-mitoetra miaraka amin'ny composite FRP. Mampiasa ny haitao ara-teknolojia, manana hery manamboatra fiara mifono vy sy sambo izahay araka ny fepetra takian'ny mpanjifa ao amin'ny zavamaniry avy eo ary ampandehanana soa aman-tsara any amin'ny tranokalanao izy ireo. Ho an'ireo fiara mifono habe lehibe kokoa, manana ny toetra tsy manam-paharoa isika amin'ny fananganana tranokala mankany amin'ny mombamomba anao manokana ...
Raha takiana ny insulation dia asa tsotra ny fampitaovana ireo fiara mifono vy miaraka amin'ny sosona foam ho an'ny 50mm izay rakotra sosona FRP 5mm. Ity fomba insulation ity dia miteraka ny vidin'ny K ny 0.5W / m2K. Raha ilaina ny savaivony dia azo ampifanarahina, ohatra amin'ny foama 100mm PU (0.3W / m2K). Fa ny hatevin'ny insulation amin'ny ankapobeny dia 30-50mm, raha toa ny haben'ny fiarovana ny fiarovana ivelany dia mety ho 3-5mm. Ny tankina FRP dia hery matanjaka noho ny vy, fanaterana vy, plastika sy ny sisa. Theref ...
Ny fiara mifono vy matevina dia afaka amboarina sy vokarina amin'ny endrika samy hafa, habe, loko, matevina, fepetra serivisy ilaina, insultoj, conductivities, sns .. Ireo indostria samy hafa mampiasa tanky misy sakamalaho fibre ho an'ny rafi-bolan'izy ireo: 1. Fangaro mifangaro, mpametaka, mpanasa sy ny maro hafa. ho an'ny angovo nokleary sy indostrian'ny fitrandrahana sy ny harena ankibon'ny tany. Manamboatra ny mpanjifa marindrano ho an'ny tetikasa maro. Ho an'ny tetikasa samy hafa, voafantina maro no nofidina hihaona differe ...
Ny tanky fitaterana fiberglass dia aseho amin'ny: ● Fiadiana mikorosiana mikraoba; ● Tany malefaka sady tsara diovina; ● Hery mahery vaika sy hery fanoherana; ● fanoherana ny fahanterana; ● lanja maivana; ● fitondran-tena malefaka; ● fitehirizana hafanana tsy miovaova; ● Ny asa fanompoana lava, izay efa ho 35 taona mahery; ● Maimaimpoana; ● Fitaovana fanafody na fampangatsiahana azo apetraka isaky ny mitaky. Qual ...
Mamatotra fanamafisana FRP, Masinina fanamafisana GRP, Nohavaozina Fiberglass, hamolavola, Fitaovana fanodinam-bokatra Fiberglass, Famolavola grating,